Namuhla Formula ibhayisikili wathandwa izinhliziyo abathengi abaningi emhlabeni for izinga layo kakhulu futhi sikhulu eqolo. Ezahlukene amamodeli imibala ukusiza amaklayenti ngamunye ukumisa ukukhetha ngokwanelisa izidingo kanye nalokho okuthandwa iyunithi yakhe. ibhayisikili ngamunye hhayi kuphela omuhle wobuciko, kodwa futhi ngempela ukusebenza, ezikwazi futhi imoto ngokomthetho ephelele.
Kafushane mayelana sha
Lapho kwazalelwa khona inkampani eponymous kuyinto Ukraine. Brand yilona jikelele amabhayisikili zomphakathi intengo isabelomali isigaba. Lokhu ezokuthutha igxile omdala, ingane nezethameli ingane. Le nkampani inyathelisa izimoto kangcono nezidingo Abahamba Ukraine futhi bazivumelanisa imigwaqo yasekhaya.
Umkhiqizo ngamunye ekhiqizwa ngaphansi brand esibekiwe, enziwe umphefumulo. Professionals hhayi kuphela benze umzamo, kodwa futhi zisebenzisa izesekeli amahle. ukunakwa Omkhulu umenzi asebenzisa ngayo imicabango yabantu nezimfuno amakhasimende, abangekho amanothi kuphela kodwa futhi acabangele emsebenzini olwengeziwe. Minyaka yonke sha ukuthuthukisa imikhiqizo yayo futhi kancane kodwa ngokuqinisekile unqoba angaphandle emakethe imikhiqizo efanayo.
Ububanzi entabeni efanayo brand name izimoto kuhloswe izethameli yobusha. Formula Ibhayisikili kuyinto imoto nge amasondo emikhulu wazihlephula disk hlobo. Kuyinto stylish, emangalisayo okunokwethenjelwa futhi enamandla kakhulu. amaloli okunjalo senzelwe entsheni, ukukhula zazo luyehluka in the uhla kusuka 145 kuya 165 cm. Isici yalezi onobuhle luhlaka ibhayisikili nge angajwayelekile engela ukuphambuka. Lokhu imoto yakhelwe ukuba ahambe emaceleni ale ntaba, ihlathi emizileni, futhi imigwaqo yasedolobheni ngesivinini. Leyo mikhumbi ezivamile emabhayisikili abanjalo bangabaphostoli Dynamite, Hummer futhi Dakar.
Touring amamodeli we izimoto okufanayo brand name ivelele sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene zabo. Formula ibhayisikili kuleli banga senzelwe imigwaqo yasemadolobheni, ezindaweni ezimagebhugebhu kanye nenhlabathi esingemnandi. Leyo mikhumbi ethandwa kakhulu emabhayisikili kulesi sigaba yilezi Magnum futhi HORIZONT.
City ulayini zimoto emabhayisikili, okuyinto zenzelwe ushayela ku migwaqo ekhonkiwe, neqoqo ubuncane zonke izinhlobo izinsimbi kanye kuzwakala. Le mikhiqizo brand kuvamile impela. Buys izinhlobo eziningi kulolu chungechunge ezibhekwa Breeze no-Omega.
Esakhula isigaba imoto kuyinto jikelele. It has Uhlaka aphansi, namasondo amancane futhi ifakwe inombolo kahle nezinamathiselo. Leyo mikhumbi ezivamile kulolu chungechunge kukhona lime, ZASEHLATHINI nobunomoya.
umugqa Wezingane izimoto has a zifana esimangalisayo amamodeli amadala. Ngamunye Formula ingane ibhayisikili inezici yokwakheka ukuthi ziqondiswa kokubili abafana namantombazane. imoto ngasinye sibandakanya amasondo ukuqeqeshwa, angasetshenziswa uma kunesidingo. Zonke emabhayisikili kulesi sigaba anemisila kwagcizelela nezinsimbi steel futhi spokes.
izimoto Izingane imodeli
Lime - imoto nge spectrum enemisebenzi isinyathelo, okuhloswe ngalo izingane ezincane kakhulu. Formula ibhayisikili le imodeli akanayo eziseceleni engabangela isithakazelo ezingadingekile ingane. Kukhula izingane, okuyinto ngamakhasimende imoto -. Is the uhla kusuka 100 kuya 130 cm ukukhetha okubanzi imibala kuyogxilisa iyiphi ingane.
Marichka - ibhayisikili enhle, ezingase zibangelwe inothi yokushisekela izwe ngesimo nomhlobiso Ukraine. Lokhu ezokuthutha igxile ekukhuleni amantombazane kusuka 95 kuya 105 cm.
Race - ikhophi esiqondile i ibhayisikili imodeli omdala, okuyinto has a design sporty, amasondo emangalisayo zikanokusho spokes nakakhulu.
Ezemidlalo - imoto kokuba phansi ifremu, kunalokho ongaphakeme-ayejikijela usebe elikhanyayo kanye nomklamo imfashini. Formula ibhayisikili le ukuguqulwa kwesicelo jikelele, ngakho-ke, kufanelekile kokubili abafana namantombazane ukhuphuka uvela 105 kuye ku-120 cm.
Amathathu Formula ukhululekile kakhulu futhi functional imodeli izimoto. ezokuthutha Lokhu izingane 'Liyindawo ibhayisikili iphephile ukushaqeka womoya iyavuleka amasondo, uhlezi backrest kanye ne-aluminium amasondo. Imoto ifakwe kubhasikidi capacious ngoba umthwalo futhi ucingo. Velobayk igxile ibanga lobudala izingane, kusuka 1 kuya eminyakeni emi-3.
Brand Formula izikebhe eziningi ezahlukahlukene, njengoba intengo emangalisa yelinyenti ingxenye. Izindleko zalesi imoto zokhahlamba kusuka 4450 kuya ruble 6200.
Formula Amabhayisikili: izibuyekezo zamakhasimende kanye nochwepheshe. I ngebuhle nebubi ukuthi kufanele kubhekwe ngesikhathi ukuthengwa
Ngokusho kochwepheshe ezimele futhi abathengi imoto, emabhayisikili yalesi brand kukhona ukukhanya kakhulu, ezikwazi futhi iphephile. Ukubukeka izimoto yalesi brand ziyojabula zonke ikhasimende nge ukukhanya yayo futhi banganhlanhlatsi. Ngenxa yokwakheka esihlalweni ukuma, umgibeli izonethezeka uma uvakasha nganoma yisiphi ibanga.
Phakathi izinzuzo imoto kubalulekile ukuphawula amandla izindlu eyenziwe eliphezulu, yensimbi awugqinsi, esihle ukushaqeka wezinciphisi kanye omuhle ukubopha uhlelo okungukuthi elingenazinkinga.
Ngaphezu izimfanelo ezinhle zalezi zimoto kubangele ezinye izikhalazo ezivela kubasebenzisi. I nemibi ibhayisikili idingekile ukuze eziningi imikhiqizo isisindo ukuthi abanakukwazi ukukhulisa ingane, inhlangano inobudlabha, amasondo yekhwalithi ephansi abese eselishova ezidinga esikhundleni ngokushesha.
Kiwi esikhwameni: ukudala ngemizuzu emihlanu